Xoogaa Tamarta Lacag La'aanta ah * Boostings Grants FAQ - Energies Happy
Boostada iyo kuleylka bilaashka ah waxay bixiyaan deeqaha
Shaqadu ma lacag la'aan tahay?
Waa immisa deeqda?
Maxaa shaqeynaya daboolaya?
Milkiilayaasha miyuu dalban karaa?
Miyay wax ku xiran tahay meesha aan ku noolahay?
Ma inaan bixiyaa kadib markaan dib u dalbado deeqda?
Riix halkan si aad u dalbato!Halkan waxaa ah su'aalo badanaa la isweydiiyo oo ku saabsan boorsooyinkeena iyo kululaynta kuleylka
Yaa bixiya deeqda?
Maalgelinta deeqda ayaa waxaa lagu siiyaa Energy Energy by mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha tamarta weyn. Marka la eego Nidaaminta Tamarta Shirkadda ama barnaamijka ECO, iyada oo loo marayo Barnaamijka Caawinaada Barnaamijka Cabbirka ee Dawladda, bixiyeyaasha tamarta ayaa looga baahan yahay inay bixiyaan deeqo si ay u caawiyaan qoysaska dakhligoodu hooseeyo si loo yareeyo qiimaha kululaynta iyo kululaynta kululaynta
Iyadoo loo marayo nidaamka ECO, deeqdu waxay ku kala duwanaan doontaa hanti ma guurtada waxayna kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran hadba sida loo shaqeynayo. Guryaha iyo guryaha waaweyn ee guud ahaana way adag tahay in la kulmo sida guryaha derbiga adag ama guryo liidata oo liita. Shaqooyinka hoos u dhigaya qiimaha kuleylka ayaa sidoo kale keenaya deeqo ka badan sidaas darteed guryuhu isticmaalaan shidaal qaali ah sida korantada farsamada iyo LPG waxay heli doontaa kaalmo ka sareeya guriga iyadoo la isticmaalayo gaaska caanaha.
Miyuu shaqooyinka kululuhu marwalba lacag la'aan yahay?
Xaalado badan haa waxay yihiin! Si loo ogaado haddii shaqadu ay bilaash tahay waxaan u baahannahay inaan marka hore u baahanno in aan wax badan ka ogaanno gurigaaga si aan u ogaano inta deeqda la bixiyo iyo ka dibna ay qaadaan sahan farsamo si loo ogaado inta ay shaqadu ku kacayso. Kharashka shaqadu way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran heerka shaqada ee loo baahan yahay, sida tooska ah ee isku dhejinta kuleylaha ayaa noqon doona wax ka yar inta lagu rakibayo nidaamka kuleylka buuxa.
Waajib ma noqon doontid inaad horay u sii wadatid shaqooyinka haddii aysan dhicin lacag la'aan. Had iyo jeer waxaan sameynaa wax walba oo aan awoodno si aan isku dayno oo aan u ilaalino kharashyada hoos ku xusan si aan u shaqeyno bilaash laakiin waxaa had iyo jeer lagu go'aamiyaa qaddarka deeqda aan ka heli karno kaaga.
Maxaa ka shaqeeya deeqaha?
Deeqaha ayaa loo heli karaa shaqooyin kala duwan oo kuleyl iyo kuleyl. Deeqaha ugu weyn waxaa laga helaa dadka u baahan shidaal saliideed ah ama LPG ama kuwa hadda kuleyliya kuleyliyaha kuleyliyaha ama kuleyliyaha kaydka. Haddii gurigaagu ubaahan yahay daboolka derbiga ama daboolka daboolka, taasi waxay noqon kartaa mid bilaash ah waxaanna samayn karnaa baaritaanka tan markaan sameyno EPC.
Guriyee ayaa xaq u leh?
Dhamaan guryaha gaarka loo leeyahay ama kuwa gaarka loo leeyahay ee ku yaal Great Britain waxay xaq u leeyihiin barnaamijka kuleylinta kuleylka ECO ilaa iyo inta uu jiro qof ku nool guriga oo ku saabsan faa'iidooyinka mudan. Xaaladaha qaarkood nidaamka kuleylka hadda jira wuxuu u baahan yahay inuu si tartiib ah u shaqeeyo ama gebi ahaanba la jebiyo ka hor inta aan la siin heerka deeqda sare ee shaqada dib u habeynta. Guriyeynta guryaha bulshada xaq uma laha deeqdaas.
Energy Energy waxay ku siin kartaa lacagta kuleylinta ama kuleylinta iyada oo aan loo eegin meesha aad ku nooshahay inta aad ku nooshahay Boqortooyada Midowday iyo gurigaaga gaarka loo leeyahay ama si gaar ah loo kireeyo. Devon iyo Cornwall waxaan ku shaqeyneynaa adeegsigeena adoo isticmaalaya injineernimo u gaar ah iyo qaybaha kale ee Ingiriiska waxaan la shaqeyneynaa si taxadar leh oo loo xulay si loo fuliyo shaqada.
Waa maxay nooca kululeeyaha ama kululeeyaha kaydka ah?
Waxay kala duwanaan kartaa, laakiin sida caadiga ah waxaan ku rakibeyn doonaa tayada sare ee wiyisha Worcester Bosch iyo kuleylinta kaydka ee Dimplex.
Anigu waxaan ahay mulkiilaha, ma dalban karaa haddii kireystahaygu uu kufaraxsan yahay?
Haa. Xaaladdan waxaad tahay codsadaha waxaanan u baahanahay inaan aragno nuqulka waraaqaha kireystaha kaas oo caddeynaya inay ku nool yihiin guriga si loo casriyeeyo. Deeqda looma celin karo sidaas darteed xitaa haddii kireystuhu uu guuro waxaad sii haysan kartaa qalabka kuleylka cusub.
Ka waran haddii aanan horay u haysanin kuleylka?
Haddii gurigaagu uusan lahayn kuleylka, markaas waxaan ku siin karnaa deeqda ku saabsan kharashka ku rakibidda gaas, saliid ama LPG kuleyliyaha. Hase-yeeshee, deeq-bixintu maahan mid aad ufiican in lagu daboolo kharashka ku baxa shaqada oo dhan (ama mulkiilahaaga) waxay u baahan doonaan inay bixiyaan tabaruc ku saabsan kharashka shaqada. Waxaa kale oo aan ku rakibi karnaa kuleyliyaha kuleylka kuleylka ee kuleyliyaha sareeya, taas oo laga yaabo in ay ka shaqeyso qiimaha raqiis ah, taasoo awood u siinaysa in lagu rakibo bilaash ama kharash ka hooseeya habka kuleyliyaha oo dhan.
Shaqo noocee ah ayaan u baahanahay inaan muujiyo?
Waxaan u baahnaan doonaa inaan aragno nuqul ka mid ah waraaqaha codsiyada ee ugu dambeeyay oo ay tahay inay ku jiraan bog kasta oo warqadda la helay. Sidaa daraadeed haddii warqadda ku qoran bogga 1 ee 7, waxaan u baahanahay inaan aragno oo aan qaadanno koobiyada dhammaan bogagga 7. Haddii shuruudaha waxtarka ay kaaga baahan yihiin inaad ku jirto heerka ugu hooseeya ee heerarka qaarkood, tan waa in si cad loogu muujiyo warqadda dheefta iyo faahfaahinta wixii carruur ah ee aad haysato haddii
Ma inaan bixiyaa oo kadib dib u soo celiyaa deeqda?
Maya. Shirkadda Happy Energy waxay sheeganeysaa deeqda tooska ah ee iibiyaha tamarta ka dib marka shaqooyinka la dhammeeyo. Hase yeeshee, haddii deeqdu aysan daboolin kharashka buuxa ee shaqooyinka aad u baahan tahay inaad bixiso kharashkaaga ka hor inta aan la bilaabin shaqada.
Boorseeyahaygu waa gaas gaas, ma codsan karaa?
Xukuumaddu dhawaan waxay bedeshay xeerarka ECO si ay u tijaabiyaan una dhiirrigeliyaan alaab-qeybiyeyaasha tamarta in ay ku qaataan lacago badan oo guryahooda ah oo daboolaya shidaal qaali ah sida saliida, LPG iyo korontada. Deeqaha ayaa weli diyaar ah loogu talagalay kululeeyaha gaasaska laakiin waxaa si weyn loo yareeyey macnaha aad mar walba u baahan tahay inaad ka qayb qaadato kharashka shaqada. Si kastaba ha ahaatee waxaan heli karnaa deeqo si aan u rakibno boorsooyinka gaaska loogu talagalay dadka aan hadda isticmaalin gaasta caanaha si ay u kululaan guryahooda, laakiin kuwa geli kara gaasta caanaha ah waxaanan ka bedeli karnaa nidaamka shidaal kale ilaa gaaska caanaha.
Ma la helayaa dhaqaale haddii shaqadu aanay lacag lahayn?
Haa. Iyadoo ku xiran xaalad iyo ogolaansho waxaan awoodi karnaa inaanu bixino dhaqaale si loo daboolo kharashka waxtarka lagaa rabo inaad samayso.
Mar labaad xusuusnow faa'iidooyinka aan u baahanahay inaan joogo?
Cunugga ama Canshuurta Lacagta Canshuurta (Dakhliga ugu badan ee dakhliga sanadka oo dhan)
Universal Credit (heerka ugu sarreeya ee dakhliga bishii)
Aad ayaan rabaa inaan dalbado! Hadda maxaa?
Wanaagsan! Fadlan buuxi foomka xagga sare ee bogga annagana waanu la xiriiri doonaa si aan ugala hadalno geedi socodka adiga, ama wac Isniinta ilaa Jimcaha lacag la'aan ah 0800 0 246 234.
Codso kharashka kuleyliyaha ama kuleylka hadda
Waa maxay faa'iidada aad leedahay?Dammaanadda Lacagta hawlgabkaCaymiska Cunugga ama CaymiskaKaalmada Shaqada iyo Kaalmada Taageerada DakhligaGunnada Shaqo-doonka ee ku salaysan dakhligaTaageerada DakhligaUniversal CreditkaleLacag maaha Waa noocee kuleylka aad jeclaan lahayd?Shidaal SaliiddaLPG KuleyliyahaGaasiintaKaydka kuleylkakale Sidee ayaad u maqashay deeqdeena?Warqadda warqadda boostadaXayeeysiinta wargeyskaGoogle / raadinta webkaQaraabo saaxiibtinimokale
Trust Trust Energy si aad u dalbato deeqda kuleylka
Mashiyeyaashayadu waa xirfadlayaal aad ku kalsoon tahay inaad ka baxdid gurigaaga ka dib markaad dhisto